Sanganisa leggings - Yakakwana mazano ezuva rega rega | Bezzia
Susana godoy | 03/12/2021 10:00 | Chii chandinopfeka
Kubatanidza leggings chinhu chiri nyore, kunyange zvazvo dzimwe nguva tichishaya mamwe mazano. Vakava chipfeko chekutanga uye chimwe chezvakanaka zvayo zvikuru ndezvekuti: Kukwanisa kuipfeka kwenguva yakareba sezvatinoda. Inonyanya kukosha ndeye black leggings, sezvo ivo vachatibatsira kusarudza mamwe mazano akasiyana.
Zvese zviri zviviri zvezviitiko zvine mamwe mabhurashi emhando yepamusoro pakupera kwezuva, pamwe neakanyanya kukosha kana akajairika. mangwanani kana masikati. Saka, isu tinogara tine mazano kune zvese zvinonaka. Kana iwewo uchida kubheja pazviri, inguva yekuanyora ese pasi.
1 Nzira yekupfeka leggings ne blouse refu
2 Oversized jumpers ane shiny leggings
3 Leggings ine vest
4 Long knitted jacket uye sneakers
5 High-heeled shangu uye blazer
6 Leggings nehembe-maitiro ehembe
Nzira yekupfeka leggings ne blouse refu
Imwe yemazano ekutanga atinofanirawo kuva nawo muwadhiropu yedu ndeye blouse jena. Nokudaro, munyaya iyi tinogona kuibatanidza ne-black leggings. Iwo maviri akakosha mavara anogara achiwedzera kunaka uye kuravira kwakanaka. Iro blouse pacharo, unogona kuripfeka mukati asi kana uchida kana rakareba, saka zviri nani kunze. Iwe unogonawo kuisa bhanhire rakatetepa kuti upedze kutarisa kwako. Zvechokwadi, jekete redenim kana jasi rejira nguva dzose mazano maviri akakwana kuitira kuti usatonhore.
Oversized jumpers ane shiny leggings
Mukati meblack leggings, isu zvakare tine akati wandei ekupedzisa. Imwe yeanonyanya kudiwa ndeaya ane iyo inopenya kubata. Zvakanaka, imwe yemafungiro akasununguka ndeye kubheja pamajuzi akakura kana anozivikanwawo se oversize. Kana tikaasanganisa nemabhuruku aya uye zvakare mamwe ma sneaker, isu tichava neakarebesa asi anogara akasununguka maitiro.
Leggings ine vest
Isu takatotaura kuti kusanganisa leggings chaive chinhu chiri nyore uye isu tave kutove nechokwadi nazvo. Nokuti munyaya iyi takasarudza imwe nguo refu yakadai sevheti, asi haiuye yega. Kubva pakugadzira chitarisiko chako chitsva, unogona kugara uchibheja pa mbabvu kana majuzi emvere akapfava zvikuru. Ehe, mune iyi kesi, iwe unogona kuita kuti iwedzere kusimba, wedzera vheti uye zvimwe zvekuwedzera senge necklace refu kana hengechefu. Rangarira kuti zvishongedzo zvakakoshawo pakupedza zano rakadai. Waizoabatanidza mumavara api?
Long knitted jacket uye sneakers
Hongu, leggings inotibvumirawo kuti tipfeke nenzira iyi uye pamusoro pezvose, zvemwaka uno. Isu tinofunga zvakare nezve yakakosha sweta ine ribbed kupera iyo inogara iripo muwadhiropu yedu. Tichasarudza ma leggings edu nekuwedzera kana kushoma kupenya uye refu cardigan. Pfungwa yakakwana yekuve wakasununguka kubasa. Iwe unogona zvakare kubheja pahuro kana choker kana juzi riine kakora. Iwe uchaona izvo zvakanaka musanganiswa!
High-heeled shangu uye blazer
Kuti uwane zvishoma zvishoma semi-formal maitiro, unogona kusarudza kusanganisa leggings nezvitsitsinho kana ankle bhutsu dzinewo zvishoma chitsitsinho. Pamusoro, iwe unogona kugara uchisarudza bhurauzi rine mabhurashi akajeka kana lace uye transparencies asi pasina chikonzero chekuti varemerwe zvakanyanya. Saka kukosha kwe leggings kuve mutema, saka iwe unogona kutamba zvakanyanya kana uchibatanidza jira repamusoro. Pakupedzisira, blazer inogara iri chimiro chikuru chatiri kutsvaga.
Leggings nehembe-maitiro ehembe
Hongu, ndeimwe yemafungiro iwayo atinofanirawo kufunga nezvawo. Kunyangwe zvichiita sezvisinganzwisisike kusanganisa bhurugwa uye chipfeko, zvinogoneka uye kuti inokodzera zvakakwana. Kune vakawanda vane mukurumbira vakatosarudza kutaridzika seizvi. Simply ichave yakanakira madhirezi ehembe ane mabhatani pasi kumberi, pamusoro pekuva nemamwe mazaru kana machira akajeka. Zvakanaka ikozvino nekuda kwezvose izvi, unogona kupfeka matema leggings asi pasina kupenya uye unotaridzika wakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Mazano ekubatanidza leggings kwese nguva yezuva
Nzira yekukunda nayo kutya kusiiwa nevaviri